पतीता-२ - इतिहास - साप्ताहिक
पुस २५, २०७१
नेपाली इतिहासमा काठमाडौंका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाश मल्ल सबैभन्दा अभागी राजा मानिन्छन् । आफ्ना पिता राजा जगज्जय मल्लका माहिला छोराका रूपमा जन्मिएका जयप्रकाश मल्ल आफ्ना दाजुको अल्पायुमै निधन भएपछि मात्र युवराज घोषित भएका थिए । त्यही कारणले उनलाई उनकै कतिपय भारदारले समेत राजाका रूपमा स्वीकार गरेनन् । यी त बाहिरी कुरा भए, राजा जयप्रकाश मल्ललाई उनकै महारानी दयावती -इतिहासमा जयलक्ष्मी देवी भनिएकी) ले समेत धोका दिएपछि उनको भाग्यप्रति सबैलाई जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । आफ्ना पिताको निधन भएपछि वि.सं. १७८९ मा राजा भएका जयप्रकाश मल्लले पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२५ मा काठमाडौं विजय गर्दासम्मको छत्तीस वर्षमध्ये लगभग साढे चार वर्ष राज्यविहीन भएर बस्नुपरेको थियो । त्यसको खास कारण थिइन् उनकै रानी दयावती ।
वि.सं. १८०१ मा गोर्खालीहरूले नुवाकोट विजय गरेपछि जयप्रकाश मल्लको दुर्भाग्यको कथा प्रारम्भ हुन्छ । नुवाकोट गुमेपछि वि.सं. १८०३ मा जयप्रकाश मल्लले आफ्ना सेनापति काजी काशीराम थापा तथा मन्त्री भिखुवाल गोर्खालीहरूसँग मिलेको आशंका गरे । त्यही आशंकाका कारण वि.सं. १८०३ साउनमा पशुपति नजिकै गौरीघाटमा श्रावणी तर्पण गरिरहेका बेला काजी काशीराम थापाको हत्यासँगै मन्त्री भिखुवाल पनि मारिए । उक्त घटनापछि काठमाडौंका सम्भ्रान्त वर्गसहित दरबारका शक्तिशाली भारदारहरू तौढिक काजी, गरुड सिंह भँडेलले जयप्रकाश मल्ललाई सत्ताबाट हटाउने षड्यन्त्र रचे । जयप्रकाश मल्लको दुर्भाग्य, उक्त षड्यन्त्रमा सामेल भइन् उनकै रानी दयावती ।
परिणामस्वरुप जयप्रकाश मल्ल गद्दीच्युत भए र उनका नाबालक छोरा ज्योतिप्रकाश मल्ललाई राजा बनाइयो । रानी दयावती नायवी भइन् भने तौढिक काजीले वास्तविक सत्ता सञ्चालन गर्ने हैसियत बनाए । यहीँनिर दृश्यमा देखापर्छन् गरुड सिंह भँडेल । कतिपय इतिहासकारले गरुड सिंह भँडेललाई रानी दयावतीको प्रेमी भनेर समेत चित्रण गरेका छन् । दयावती र गरुड सिंह भँडेलको सम्बन्धलाई लिएर नै राजा जयप्रकाश मल्ल तथा रानी दयावतीबीच खटपट भएको आशंका गर्नेहरू पनि छन् । जयप्रकाश मल्ल सत्ताच्युत भएपछि गरुड सिंह भँडेलसँगको सम्बन्ध उत्कर्षमा पुगेपछि रानी दयावतीका विरोधीहरू त्यतिबेलाको दरबारमा समेत देखा परिसकेका थिए । उता सत्ताच्युत भएका जयप्रकाश मल्ल चार वर्षसम्म विभिन्न भेषमा कहिले मातातीर्थ, कहिले गोदाबरी, कहिले गोकर्ण त कहिले गुह्येश्वरी क्षेत्रमा लुकेर बस्न बाध्य भए ।
रानी दयावती र गरुड सिंह भँडेलको प्रेम सम्बन्ध छताछुल्ल भएपछि वि.सं. १८०७ मा काठमाडौंको सेनाले विद्रोह गर्‍यो । विद्रोही सेनाले सत्ताच्युत राजा जयप्रकाश मल्लको खोजी गरेर उनलाई पुन: राजाका रुपमा स्थापित गर्‍यो । जयप्रकाश मल्लले राजाका रुपमा दोस्रोपटक काठमाडौं दरबारमा प्रवेश गर्ने भएपछि तौढिक काजीले आत्महत्या गरे भने गरुड सिंह भँडेल भागेर नुवाकोट पुगे । रानी दयावतीलाई हनुमानढोका दरबारभित्रै लक्ष्मीपुरमा कैद गरियो । उक्त घटनाको १८ वर्षपछि पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौंमा अन्तिम विजय प्राप्त गरेका थिए ।
प्रकाशित :पुस २५, २०७१
ख्रीष्टमसको ऐतिहासिक तथ्य पुस ८, २०७५
पतिविरुद्ध प्रेमीसँग श्रावण १५, २०७२
भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउने राजा जेष्ठ ३२, २०७२
यसरी काटिए राजा जेष्ठ २२, २०७२
जनताको पिटाइ खाने राजा चैत्र २१, २०७१
बलात्कारी राजा चैत्र ६, २०७१
पतीता-४ माघ १६, २०७१
पतीता-१ मंसिर २६, २०७१